Abakhiqizi be-Industrial Casting & abahlinzeki - China Industrial Casting Factory
Sakaza indololwane ye-aluminium
Ingabe i-aluminium emsulwa noma i-aluminium ingxube ye-ingot ilungiswe ngokuya ngesilinganiso esijwayelekile sokwakheka, ngemuva kokushisa okufakelwayo ku-aluminium alloy liquid noma isimo esincibilikisiwe bese kuthi ngokusebenzisa isikhunta sobuchwepheshe noma inqubo ehambisanayo ye-aluminium liquid noma i-aluminium encibilikayo ethela emgodini, ngemuva kokupholisa ukwakha isimo esidingekayo sezingxenye ze-aluminium.
I-aluminium esetshenziswa ekubunjweni kwe-aluminium ibizwa ngokuthi: i-aluminium alloy. Izindlela ezijwayelekile zokuphonsa i-aluminium yilezi: ukusakazwa kwesihlabathi, ukulingiswa kokufa, ukuphonsa ingcindezi ephansi, ukunemba kokuphonsa, ukukhipha isikhunta unomphela njalonjalo.
Sakaza i-aluminium flange sleeve
Sakaza isikhombimsebenzisi se-aluminium
Sakaza i-aluminium ngaphezulu
Sakaza i-aluminium radiator
Sakaza insimbi eyindilinga
Insimbi yensimbi ingxubevange equkethe ikakhulukazi i-iron, i-carbon, ne-silicon.
Kula ma-alloys, okuqukethwe kwekhabhoni kudlula inani elingagcinwa kusisombululo esiqinile se-austenite emazingeni okushisa eutectic.
Insimbi yensimbi ingxubevange yensimbi nekhabhoni enokuqukethwe kwekhabhoni okungaphezu kuka-2.11% (ngokuvamile okungu-2.5 ~ 4%) .Iyi-alloy enezinto eziningi ngensimbi, ikhabhoni ne-silicon njengezinto eziyinhloko futhi iqukethe ama-manganese amaningi, isulfure, i-phosphorus nokunye ukungcola kune-carbon steel.Som times ukuze kuthuthukiswe izakhiwo zemishini yensimbi yensimbi noma yomzimba, izakhiwo zamakhemikhali, kepha futhi engeza inani elithile lezinto ze-alloy, i-alloy cast iron.
Ngasekuqaleni kwekhulu lesithupha BC, iChina isiqale ukusebenzisa insimbi, kunamazwe aseYurophu cishe eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ngaphambili.
Ngokuya ngesimo sekhabhoni esensimbi yensimbi, i-cast iron ingahlukaniswa
Insimbi emhlophe engu-1.White cast ngaphandle kwe-ferrite embalwa encibilikayo, enye ingxenye yekhabhoni esesimweni se-cementite ikhona ku-cast iron, ukuphuka kwayo kuyisiliva-mhlophe, okubizwa ngokuthi i-white cast iron.I-iron yensimbi emhlophe isetshenziswa ikakhulu njengempahla eluhlaza okwenziwe ngensimbi nokungenalutho kokukhiqiza insimbi ethambile.
I-2.Gray cast iron carbon yonke noma iningi le-flake graphite likhona ku-iron cast, ukuphuka kwalo kuyimpunga emnyama, okuthiwa yensimbi yensimbi.
Ingxenye yekhabhoni ye-hemp cast iron ikhona ngesimo se-graphite, efana ne-grey cast iron.Inye ingxenye isesimweni se-cementite yamahhala efana nensimbi emhlophe yensimbi.Umgodi omnyama nomhlophe ekuqhekekeni, Lolu hlobo lwensimbi lubuye lube nobulukhuni obukhulu nokuqina, ngakho-ke alusetshenziswa kakhulu embonini.
Ngokuya nge-graphite morphology ehlukile ku-cast iron, i-cast iron ingahlukaniswa
1.I-graphite e-iron cast iron i-flake.
2.I-graphite ethambile yensimbi yensimbi i-flocculent.It itholakala entweni ethile emhlophe yensimbi ngemuva kokuncishiswa ekushiseni okuphezulu isikhathi eside.Izinto zayo ezenziwa ngomshini (ikakhulukazi ubunzima nobupulasitiki) ziphakeme kune-iron cast cast, ngakho-ke ibizwa kakhulu oluthambile cast iron.
I-graphite e-nodular cast iron i-spherical.It itholakala ngokwelashwa oku-spheroidizing ngaphambi kokuthulula i-iron encibilikisiwe.Lolu hlobo lwensimbi oluthambile alunazo kuphela izakhiwo eziphakeme kune-grey cast iron nensimbi yensimbi ethambile, kepha futhi inenqubo elula yokukhiqiza kune oluthambile cast iron. Ngaphezu kwalokho, izakhiwo zayo zemishini zingathuthukiswa ngokwengeziwe ngokwelashwa kokushisa, ngakho-ke isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni.
Sakaza insimbi camera isihlabathi igobolondo
Sakaza ipuleti lensimbi
Sakaza ibhande lensimbi
123456 Okulandelayo> >> Ikhasi 1/18